ကဗျာ - Blogs - Myanmar in Singapore
All Blog Posts Tagged 'ကဗျာ' (405)
Added by Ye latt on January 22, 2013 at 11:17am —
No Comments ခေါင်းစဉ်မသိသောစလေဦးပုည၏ရှေးဟောင်းကဗျာ
မျက်နှာကို ခြေနှင့် ကျောက်စေတော့ သွေမဖောက် ခုနော် လင်ငါးယောက်ပေါ်စေ
ချစ်လှလို့ သည်းညည်းခံသည် ဆဲရေးသံကိုလည်း အငြိမ့် သံပွဲလို့ စိတ်ထဲကထင်တယ် ကွာမည်ကို မဆိုလိုက်ပါနှင့် မယ်ရိုက်လျှင် ကုန်းခံပါ့မယ် ဖိနပ်နှင့် အရပ်လယ်မှာ… Continue
Added by Ye latt on January 21, 2013 at 11:54am —
No Comments ဘီလျံနာသူဌေးကြီး ရေဂျော့ဆိုးရော့စ်၊မြန်မာပြည် ရှိ ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့်ဆွေးနွေးခြင်း
ဘီလျံနာသူဌေးကြီး ရေဂျော့ဆိုးရော့စ်၊မြန်မာပြည် ရှိ ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့်ဆွေးနွေးခြင်း…
Added by Ye latt on January 7, 2013 at 9:59pm —
No Comments မယ်ဖွဲ့တေးထပ်
ယုဇနာ တခန့် နှစ်ခန့်၊
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 4:01pm —
No Comments သရော်စာ
မင်းလိုက်ခဲ့အုန်း။ ဦးပုညဒွေးချိုး Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:57pm —
No Comments သံဝေဂဖွဲ့
မင်းသာဓု ပေး။ ။
ဦးပုည(လေးဆစ်) Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:52pm —
No Comments သစ္စာတိုင် (တြိချိုး)
သစ္စာတိုင် (တြိချိုး) – (ဦးပုည)ကြက်ညီနောင် ရေဝယ်မျောစေတော့၊မြကြော မင်းဝံရွှေတောင်၊လဲတော့မရှောင်။အာကာဘောင်၊ကြယ်ပြောင်ကွဲ့ မြေလူး။ပြည်ဇေယျာ၊လေလာလျှင် မြေပါရွေ့စေတော့၊ခင်လေ့ကို မောင်မမုန်းတယ်၊သုံးဘဝကူး။ ။ဦးပုည(တြိချိုး) Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:49pm —
No Comments သံဝေဂ တေးထပ်
သံဝေဂ တေးထပ် – (ဦးပုည)ဆယ့်လေးနှစ် ဖူးစတောင်၊ဘီလူးမ ထင်တယ်၊တဦးမှ မခင်တွယ်ပေါင်၊စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဇော၊မိန်းမက လက်ကုတ်လာတောင်၊စက်ဆုပ်တာ များတဲ့သဘော။ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် တောင်ဖီလာလို၊ချောင်မှီကာ စုံတော၊မောင်သည်ခါ ဘုံလျှောလို့၊တုံဏှဘော နေချင်၊နတ်ကညာ လာ၍စီးသော်လည်း၊သဘက်ကြီး… Continue
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:49pm —
No Comments လမင်းထက် နှစ်လေးသာ
လမင်းထက် နှစ်လေးသာ (ဦးပုည)ကောင်းခြောက်ဆယ်လေးရပ်နှင့်သွေးထပ်ထပ် ရုပ်ညီ
ရှေးနိပါတ် ထုတ်မှီသည်ဖုဿတီ ထွတ်(ထွဋ်)ထားဗိမ္မာနတ် ကိန္နရီလိုတသိင်္ဂီ ယိုးတော့မမှား။ဥမ္မာဒ ရုစာ(ဇာ)မယ်လိုနုရှာတယ် အသားကုမုနွယ် နုတ်ဖျားကပတ္တမြား သဖွယ်ကြယ်ဥက္ကာ ညဉ့်ရောင်မီးလိုပခင့်… Continue
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:48pm —
No Comments သိကြားလိမ် (ဘုရားကိုနှစ်ရစ်လိမ်)
သိကြားလိမ် (ဘုရားကိုနှစ်ရစ်လိမ်) – ဦးပုညနန်းမေရုပြာသာဒ်၊လမ်းဖြတ်တဲ့ ဣန္ဒာ၊ကမ်းသတ်လို့ နှိမ်ရှာတယ်၊အလိမ္မာလွန်သား၊ထောက်လှမ်းချက် သုဓမ္မာဝယ်၊ခုအခါ လစ်ကြသလား။ဘုရားက သိကြားကို မှာတယ်၊ဌကထာ ရှိသား၊သာသနာ ငါထားငဲ့၊မမှားအောင် စေ့ဆော်၊မကောင်းသူ့ ကောင်းသူတို့ကို၊ကြောင်းယူလို့… Continue
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:47pm —
No Comments ကာလဆိုး
ကာလဆိုး (ဦးပုည)ကာလနှယ် ဆိုးပါဘိ၊သူခိုးက လူလူ၊တောလေ့ပေါက် နန်းမူ၊အိမ်သူကို ဧည့်စောင်း၊သူကောင်းကို အပြစ်တင်၊တောင်ယာရှင် မျောက်လိုက်လို့မောင်း။ ။ လေးတရာ့ဆီမှန်လျှင်၊ရေနံလောက်မကောင်း၊စိတ်အနေ ရုပ်ပြောင်းလို့၊ချောင်းကိုပ မြစ်ထင်၊တူရိယာ… Continue
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:46pm —
No Comments အကြမ်းတေးထပ်
အကြမ်းတေးထပ် – (ဦးပုည)သူပြောင်ရင် ခေါင်ကွန့်လို့၊ကြောင်ဝံ့တဲ့လူပါ၊ရှောင်မတွန့် ကျောက်သော်မာရင်၊နောက်တော်ပါ သံချောင်း၊ပြော့ကြစို့ ညီလွယ်ရင်၊ရွှေဆီဝယ် ချက်တဲ့ ဖယောင်း။အိုးတော်က ပဲ့ပိန်ရင်၊ရွဲ့လိမ်လိမ် စလောင်း၊သူချိုရင် ကြံချောင်းပ၊ဉာဏ်စောင်း၍ ခါးမူ၊တမာပင်ထိပ်ဖျားက၊ကြက်ဟင်းခါး… Continue
No Comments တေးထပ်ရေးနည်း
တေးထပ်ရေးနည်း (ဦးပုည)တေးထပ် တေးထပ် ရယ်နှင့်၊ရေးစပ်ကြ သူငါ၊တွေးကပ်လှ နမူနာ၊ချူအချာ လွန်ပေါ၊ယခုခေတ် ပြုသစ်စာ မှာ၊ရှုချစ်စရာ ရွေးမျှမနှော။သို့မို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်ညီငယ်၊မဟုတ်သည် နယော၊နှုတ်ဝသီ သဘောမှာ၊အဟောသိ ပယ်ပါ၊သပြေမှာ စလေနည်း ကိုမှ၊ဆွေမှီး၍ ပြုသင့်သည်သာ။စပ်မူနည်း… Continue
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:45pm —
No Comments သစ္စာတိုင်
သစ္စာတိုင် (ဦးပုည)ထုံးမတိမ်၊ငုံး အိမ် ကျူ လ သို့၊တူမျှစံနှိုင်း။ထပ်တညီ၊ကပ္ပဋ္ဌီတင်ထိုက်တဲ့၊ယဉ်သိုက်ဝင် သည်မေနှင့်ရယ်၊ငါးဆင့်သမိုင်း။ ။ဦးပုည(ဒွေးချိုး) Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:44pm —
No Comments သစ္စာပျက်မှာတမ်း
သစ္စာပျက်မှာတမ်း (ဦးပုည)သနစ်စုံ၊ဖြစ်ပုံဖြင့်ခက်သား။မလေးခင် ပေလွှာရေးတယ်၊ဝေးတရပ်ခြား။ ။ဦးပုည(ဒွေးချိုး) Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:43pm —
No Comments ရှုလေယဉ်လေ (သိကြားမှိုင်)
ရှုလေယဉ်လေ (သိကြားမှိုင်) – ဦးပုညနန်းရံတရာ ပဏ္ဏာခမန်းမန္တလ ဗွေရိပ်စံ။စန်းစန္ဒရ ငွေဗိမာန်လိုပင်ရွှေထိပ်ပန် ယဉ်မျာ့းပန်း။ဂုဏ်ထူးကေလျော့ တကြော့မှန်ငယ်မဟော့်သက်နှံ တော်လေးအမရာ့ငြမ်း။ကပိုကရို့ သူ့အမူငယ်ဇမ္ဗု့မတူ ပြိုင်သူလျှမ်း။အမူ့အယူ လှိုင်ကြူပန်းသို့ဆန်းဆိုသမျှ… Continue
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:42pm —
No Comments ( စလေ ဦးပုည ) ရေးသားသည့်အလှဘွဲ့
( စလေ ဦးပုည ) ရေးသားသည့်အလှဘွဲ့…
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:40pm —
ပန်းထည့်လို့ထုံး။ Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:38pm —
No Comments (ဦးပုည တေးထပ်)
No Comments တူတူပုန်း
Added by Ye latt on December 24, 2012 at 3:30pm —
ဘီလျံနာသူဌေးကြီး ရေဂျော့ဆိုးရော့စ်၊မြန်မာပြည် ရှိ ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့်ဆွေးနွေးခြင်း
2013June (28)May (65)April (38)March (106)February (141)January (111)2012December (160)November (74)October (55)September (66)August (38)July (95)June (300)May (475)April (289)March (169)February (195)January (104)2011December (116)November (114)October (95)September (79)August (83)July (71)June (121)May (72)April (120)March (86)February (121)January (117)2010December (92)November (140)October (231)September (227)August (243)July (106)June (122)May (42)April (46)March (115)February (106)January (96)2009December (31)November (59)October (127)September (81)August (41)July (39)June (36)May (24)April (23)March (2)February (3)January (1)2008November (8)October (3)September (2)1999November (87) Welcome toMyanmar in Singapore
3. " ဆီး (ဇီး) သီး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ"
5. စင်္ကာပူကဗျာ (စောဝေ)
6. ခြောက်ပြစ်ကင်း လူသားများနှင့်နိုင်ငံ့အရေး
7. ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ statement တွေထုတ်၊ သဘောထားတွေကြော်ငြာနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့ စီးတွေဆီကနေ အဲဒီစာရွက်တွေတောင်းပြီး ဒန်အိုးဒန်ခွက်နဲ့ လဲရင်အတော် အသုံးဝင်မယ်.. အမေရိကား၊ဂျပန်၊စင်ကာပူ..စတဲ့နိုင်ငံမှာ…
8. အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား၏ မယ်မြ
9. ဖခင်များနေ့ဂုဏ်ပြုခြင်း (ခူနာ - ရေးသူ၊ ကိုကိုကြီး)
10. စကာင်္ပူမှ အလုပ်ရှာရန်တဖြေးဖြေးပိုခက်ခဲလာသလို ဆက်လက်နေထိုင်ရင်လဲ ပိုခက်ခဲလာတဲ့နှစ်တွေပါ!
11. ဆိုကရေးတီးသာရှိခဲ့လျင် သူ နှင့် သူ၏ဖေ့ဘွတ်မိတ်ဆွေ အင်တာဗျုး
12. “လေထဲတွင်လွင့်ပျံ့ ခဲ့သော လွင့်ပျံ့နေဆဲဖြစ်သော”
14. တရုတ်စတိုင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု
16. စာရေးဆရာဖြစ်ရန်လိုအပ်ချက် 2
17. လိုတာပေး၏ မပေး၏ လိုတာရ၏မရ၏